Your jir phone HTC helo aad u gaabis ah oo ugu dambeyntii aad u cusboonaynta in a G3 cusub LG. Fursadda in dhammaan xogta muhiimka ah, sida laga daadiyo, fariimaha, xiriirada, music, iwm ayaa tagay ee hore phone HTC. Waxaad si ay u wareejiso si aad G3 cusub LG, haddii kale waxaad khasaari doonaa a xogta weyn. Si aad u samayn HTC in LG wareejinta xogta G3 effortlessly, waxaad codsan kartaa qaar ka mid ah qalab kala iibsiga phone caawimaad. In this article, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin laba qalab kala iibsiga phone waxtar leh si ay kaaga caawiyaan in aad xogta ka soo HTC wareejiyo G3 LG leh ama aan lahayn computer.
Habka 1. Transfer Xogta laga HTC in G3 LG ee 1 Click la MobileTrans
Habka 2. Nuqul HTC Data in LG G3 Gacanta
Wondershare MobileTrans - 1-Guji HTC in Transfer G3 LG
Si aad u bilaabaan oo leh, download iyo rakibi version saxda ah ee Wondershare MobileTrans kombiyuutarka. Waxa maamula. In uu furmo suuqa hoose, dooran Phone in Transfer Phone hab.
Tallaabada 2. Isku Your HTC iyo G3 LG in Computer via fiilooyinka USB
Isticmaal fiilooyinka USB in ay xiriiriyaan laba telefoonada in computer. Wondershare MobileTrans Ogaan doonaa oo iyaga ugu dhakhsaha badan u muujiyaan in uu furmo. Tag dhexe iyo in la hubiyo content aad rabto in lagu wareejiyo ayaa la hubinayaa.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay content aan waxtar lahayn oo ku saabsan G3 LG, aad sax kartaa xogta oo cad ka hor inta nuqul inuu iyaga ka dhaqaajiyo.
Tallaabada 3. Start si ay u gudbiyaan ka HTC in G3 LG
Hadda, riix Start Copy si ay u gudbiyaan content ka HTC in G3 LG. In geeddi-socodka oo dhan, ma barkinta phone kasta.
Marka aad saxiixdo in aad xisaabta Google, Facebook, Twitter iyo xisaab kale, xiriirada badbaadiyey waa laga aad u wareejin doonaa. Jadwalka in account Google ayaa sidoo kale loo gudbin karaa.
Wondershare MobileTrans waa si gaar ah software kala iibsiga phone design ah si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda, xiriirada, fariimaha, jadwalka taariikhda, abuse wac, music, video iyo sawiro ka HTC in G3 LG. Haddii aad jeceshahay in gacanta lagu wareejiyo aan software kasta, waxaad kortaan kartaa telefoonka HTC G3 LG ah sida drives adag dibadda iyo nuqul ka files u dhaxeeya.
Tallaabada 1. Isku hore phone HTC iyo G3 LG in computer deeruhu in fiilooyinka USB.
Tallaabada 2. Marka aad computer iyaga waxay aqoonsan tahay, waxaad aadi kartaa Computer. In qaybta kombuyuutarrada gacanta, waxa aad ka arki kartaa jir phone HTC iyo G3 LG.
Tallaabada 3. Fur hore phone HTC si ay u helaan kaarka SD ay, oo nuqul ka photos, music, video iyo document files. Markaas, u furan G3 LG iyo paste files ka HTC in kaarka SD ee aad G3 LG ah.
Si ka HTC wareejiyo xiriirada si G3 LG, aad awoodo xiriirada dhoofinta hore ka phone HTC in kaarka SD iyo badbaadiyey sida file .vcf ah. On telefoonka HTC, u furan Xiriirada app iyo tuubada Xiriirada tab. Tubada icon menu iyo dooran Import / Dhoofinta > dhoofinta kaydinta USB . Markaas, nuqul oo file .vcf in kaarka SD ee G3 LG ku paste.
Markaas, On aad G3 LG, u tag Xiriirada app, ka jaftaa bar menu si ay u muujiyaan Import / Dhoofinta > Import ka kaydinta USB inay dajiyaan file .vcf ah.
More Articles laga yaabaa inaad jeceshahay About LG iyo HTC.
Xiriirada kala iibsiga ka iPhone in LG
Nuqul LG Xiriirada inay iPhone 1 Click
Kabsado Photos tirtiray ka LG Optimus
A Guide Full si ay u gudbiyaan HTC si iPhone 6
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan HTC Data in Samsung
Xogta laga iPhone wareejiyo HTC Si fudud
> Resource > Transfer > 2 Siyaabaha kala iibsiga xogta ka HTC in G3 LG